July 2, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 5
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya magaalad Gabiley oo dhacda duleedka magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in ciidamada booliska Somaliland ay xabsiga u taxaabeen dhalinyaro ku labisnayd calanka Soomaaliya.
Dhalinyaradan ayaa la sheegay in ay funaanado ka samaysan calanka Soomaaliya ay ku dhex wateen gudaha magaaladaasi, taas oo sababtay in ciidamada Booliska ay xabsiga u taxaabaan dhalinyaradaasi.
Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamadu ay dhalinyaradani xabsiga dhigeen kadib markii ay ku adkaysteen mowqifkooda xidhashada funaanadahaasi, waxaana xadhiga dhalinyaradani uu kusoo beegmayaa xili dalka oo dhan looga dabaal dagayo maalmaha xoriyada iyo markii ay biloobeen labada gobol ee Koonfur iyo Waqooyi ee dalka Soomaaliya.
Bog kan ka horreeyay ayaan haddeer ku soo arkay warka laga yaqyaqsooday ee ku saabsan nacasnimada ay jabhadda naflacaariga ah ee SNM ku la dul dhacayso waddamada caalamka. Si xun baa runtii loogu qoslaa meel walba oo ay afka ka furtaan sababta oo ah adduunyadu xaqiiqada dhabta ah marna ma seeggana.
Marka sharciyada, xeerarka, qawaaniinta, baratakoollada, iyo shuruudaha dowliga ee caalamiga la soo xigto dal “Somaliland” loo aqoonsan yahay dunida kama jiro sidiisa ba. Xaqiiqadu waxay tahay, sida intaas aan soo xusay waafaqsan, in ay geyigaas Soomaaliya ka tirsan ay fallaagadan asqeysani qas iyo lab sharci darro ah ka wadaan.
Shacabka geyigaasi waxaa dowladdooda Jamhuuriyadda Soomaaliya si rasmi iyo sharci ah u jooga oo uga wakiil ah xubno labada gole ee baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka ku matalaya oo rag iyo haween isugu jira ee ay shacabkaasu iyo hoggaankooda dhaqameedi si rasmi ah u soo xushteen. Sida caadiga ahi waxaa shacab matala kuwa dowladda guud iyaga ku matalaya ee ay rabitaankooda iyo raalli ahaanshahooda ku soo doorteen. Waxii intaas ka baxsani waa bug iyo wax aan jirin sida jabhaddan yar ee cidlada ka qaaq leh.
Xaqiiqada dhabta ahi taas weeye.
Waxii cawaan ah iyo inta ay xaqiirnimadu maanka ka curyaamisay un baa mooggan ee caalamka kama suuragali karto in gobol juuqraafi ahaan waddan ku yaalla dal gaar ah loo aqoonsado. Jasiirad iskeed badda u sabbeynaysa oo qaarad ka go’an ayaanay xataa taasu u sahlanayn oo lagu khasbaa in ay qaaradda mise dalka ugu dhaw ka tirsanaato.
Sababta aasaasiga ahi waxaa weeye in asbaabaha waddan loogu ictiraafo dal gaar ah ay aad u adag yihiin oo ayna hagaan shuruudo iyo xeerar cayiman oo Qaramad Midoobay u qeexan. Shardiga ugu weyn waa kan ku saabsan in uu dalka ugubka ahi waxsoosaar iyo dhaqaale ahaan isku filnaan karo oo uu baahiyahiisa haqabtiran karo si aanu culays dulsaar ah ugu noqonin waddamada kale ee dunida iyo hayadaha caalamiga oo shacabkiisu na aanay ku dhex dayacmin. Bal Woqooyi Galbeed oo aan dhul beereed ku filan lahayn, macdan qaali ah lahayn, saliidda madoow lahayn haddii xataa dal loo aqoonsado maxuu is tari karaa halka waddamo toban jibbar ka baaxad weyn ay isku filnaan kari la’yihiin?
Dadka ku riyoonaya gobolka yar ee Woqooyi Galbeed ayaa qaran iyo dal gooni u taagan noqon kara in dhamirka laga dhayo ayay baahi xun u qabaan runtii.
Waxa la yidhi waraabe ayaa lagu yidhi Niyow Foolxumidaa deedna intuu Soo Booday ayuu yidhi ilaahaw maad aragtid ka iga yar e Dhidar la yidhaahdo imika Bal Somaliyada ka maarmi Karin Somaliland e leh kama maarano ka waran?
@Ninkaadheer ee Caqliga gaaban,
“Bal Somaliyada ka maarmi Karin Somaliland e leh kama maarano ka waran?”
Bal hadaaqaas noo yar macnee.